Fifanarahana Aquarius sy Libra: Fisakaizana, firaisana ara-nofo ary fitiavana - Famantarana Zodiac
Fifanarahana Aquarius sy Libra: Fisakaizana, firaisana ara-nofo ary fitiavana
Ny namana tsy manam-paharoa ary ny olon-tiana mahafinaritra kokoa aza, maharitra ny fifandraisana Aquarius sy Libra. Marina izany; ny fampifangaroana ireo mari-pamantarana rivotra roa ireo dia miteraka fifandraisana manonofinofy sy erotika rehefa mandanjalanja ny rehetra. Mihombo ny fifandanjana eo amin'izy ireo!
Mila fahalalahana ny Aquarian. Libra mankasitraka sy mahatakatra ny filan'ny Aquarius mpiara-miasa amin'ny habakabaka. Tia miresaka i Aquarius ary mihoatra ny mahafeno ny filan'ny fiarahamonina Libra.
Libra dia manana ny fahaizany mivezivezy. Tsy manana olana amin'ny fidirana amin'ny fikarohana kely an'i Libra i Aquarius. Eto isika dia manangona mpikaroka adventurer roa izay mifaly mifampiresaka. Amin'ny alàlan'ny karazana traikefa nahafinaritra dia mitombo ny fifankahalalan'ity mpivady ity amin'ny fomba tsy fantatry ny mpivady hafa. Ny valiny dia ny fifanajana, na ao anaty na eo am-pandriana. Mino ity mpivady ity fa lanitra fahafito hitany!
Ny fiarahan'ny Aquarius sy ny Libra dia fiarahan'ity tontolo ity. Ny sain'i Aquarius sy ny fahaizany mampientam-po dia andriamby ho an'ny teraka Libra. Libra dia mamiratra, tia olona ary be resaka. Rivotra ny rivotra mahafeno ny filan'ny Aquarian amin'ny resaka lalina. Ny Aquarius dia mahatonga an'i Libra hahatsapa ho toy ny hoe ao amin'ny Zone Twilight miaraka amin'ny ankamaroan'ny resaka izy ireo.
Saingy, ity pairing ity dia tsy misy fanamby maro mialoha.
Lisitry ny atin'ny Aquarius sy ny Libra
Fifanarahana Aquarius sy Libra
Fitiavana Aquarius sy Libra
Firaisana ara-nofo Aquarius sy Libra
Ny fampifanarahana an'ny lehilahy Aquarius sy ny vehivavy Libra
Ny fampifanarahana vehivavy Womanarius sy Libra Man
Aquarius sy Libra Love Match Wrap-Up
Rehefa miala amin'ny monotony ary miala amin'ny fahadiovana, dia faly foana i Aquarius. Izay hetsika mahaliana sy fitsangatsanganana rehetra dia manintona ny teraka Aquarius. Ny libra dia mety ho pokey sy tsy mahalala fomba. 'Be dia be ny zavatra hatao, fotoana kely fotsiny' hoy i Libra. 'Misafidiana zavatra iray hatao ary andao hofanina miaraka aminy sahady,' hoy i Aquarius. Ny faharetana dia tsy forezan'i Aquarius. Na izany aza, samy mahita fialamboly mahafinaritra avokoa izy roa. Matetika izy io dia misy fikatsahana na fitsangatsanganana.
Rehefa misy ny spontaneity dia miroborobo i Aquarius. Mila mianatra mamela kely sy miala sasatra i Libra. Ny fanakanana ny fanetsehana Aquarian handeha miaraka amin'ny onja dia mety hanimba be ny fifandraisana. Tsy mahagaga raha mamela an'i Aquarius handray ny ankamaroan'ny fanapaha-kevitra momba ny hetsika ny Libra. Mora ho azy ireo izany. Ankoatr'izay, ny Aquarius dia toa mifidy zavatra mangatsiatsiaka indrindra hita, atao ary traikefa foana.
Ny fizarana singa Air dia manamora ny fifandraisan'ity mpivady ity. Manokatra varavarana hahazoana fahitana sy fahatakarana bebe kokoa koa izy io. Rehefa tian'izy ireo hiasa ny fifandraisana dia hiroborobo ny fifandraisana Aquarius sy Libra. Libra dia te-ho be atao foana. Ny be atao, ny tsara kokoa. Mazava ho azy, be atao ny anarana afovoany an'i Aquarius. Izy ireo no ivon'ny vondron'olona sakaiza, mpihira, mpanakanto ary mpanakanto avant-garde. Izy ireo dia mihantona amin'ireo mpandinika, filozofia ary eccentric. Ny faribolan'i Libra dia avy amina vondrona olom-pantatra efa vonona sy kanto. Samy mitambatra amin'ny fahalavorariana ireo faribolana ara-tsosialy, ka gaga tamin'i Aquarius sy Libra.
Alohan'ny ahafahan'ny fitiavana mamony amin'ny lalao Aquarius sy Libra, dia tokony hampitombo ny fifampatokisana ireto mpivady ireto. Libra dia mirona amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Mbola ratsy kokoa izany raha teo am-panambadiana sahirana izy ireo talohan'izay. Mijanona ho lavitra sy lavitra ny Aquarius. Amin'ny ampahany, dia satria tian'izy ireo ny fahaleovany tena. Ny antony iray hafa amin'ny fitondran-tenan'i Aquarius dia satria ny Aquarian teraka dia manana olana amin'ny fahatokisana ihany koa. Ireo olana ireo miaraka am-pahatokisana dia miteraka lozisialy ratsy. Ho tsapan'ny teraka Aquarian fa mahita fandrahonana ara-pihetseham-po mafy izy ireo.
Ny fifampitokisana eo amin'ny fifandraisana Aquarius sy Libra dia tsy mandeha ho azy. Izy io dia zavatra izay mitombo miaraka amin'ny fotoana. Ny mpivady dia afaka mijery izany ho toy ny fototra amin'ny famoronana zavatra mafy orina.
Tian'i Aquarius ny fiaraha-monina, toy ny Libra ihany koa. Ny filàna ny sain'ny hafa ivelan'ny fifandraisana dia voajanahary. Raha mijanona amin'ny finamanana fotsiny ny fifandraisana ivelany, dia tsara izao tontolo izao.
Raha lasa mampihetsi-po ny Libra ary miankina be loatra amin'ny Aquarius atsy ho atsy, dia misy ny olana. Eto, mihoatra noho ny hatramin'izay, ny Libra dia tsy maintsy mahita fifandanjana amin'ny alàlan'ny fifangaroana faharetana sy fahatakarana. Na dia mila fotoana kely aza ny fahafahan'ny Libra amin'ny fanakanana, mila fotoana fohy vao manolo-tena ny Aquarius. Samy manana fanamby handresena ireo mpiray antoka alohan'ny hahatongavan'ny fanoloran-tena maharitra ho lasa foto-kevitra azo ekena.
Ny fanambadiana dia fotokevitra iray izay mbola lavitra hatrany amin'ny filentehan'ny masoandro. Na tsara kokoa: 'Any amin'ny toerana avana.' Aquarius dia mandray ny fotoana mahafinaritra alehany any. Libra dia vonona ny hanambady alohan'ny Aquarius. Mandritra izany fotoana izany dia heverin'i Aquarius ho fady ny teny. Raha mifankatia ireo mpivady ao amin'ity fifandraisana ity dia mety ho eo amin'ny kintana ny fanambadiana. Raha lasa manintona loatra ny mpivady amin'ny resaka momba ny fanambadiana, dia mety hanimba ilay fiarahana. Miakatra haingana ny lolom-po satria ny fanosehan'ny sakaiza dia famadihana fitokisana.
Ao ambadiky ny varavarana mihidy miaraka amin'ny lambam-pandriana dia mihodina, ny firaisana amin'ny lalao fitiavana Aquarius sy Libra dia mangatsiaka sy mafana! Saingy, tsy manomboka toy izany. Ireo roa ireo dia tsy latsaka am-pandriana miaraka amin'ny firaisana ara-nofo tonga lafatra amin'ny lafiny rehetra. Misy sakana vitsivitsy handresena. Saingy, manaporofo ireo mpivady ireo fa mandresy ireo sakana ireo dia mendrika izany.
Ny sakana voalohany dia ny fanakanana an'i Libra. Sahirana izy ireo amin'ny fahatsapana ho mahazo aina amin'ny hodiny. Na eo aza ny famantarana nofehezin'i Venus, somary saro-kenatra i Libra. Ara-nofo sy ara-nofo, Libra dia mety ho mpamitaka mangatsiaka ao amin'ny efitrano fandriana. Na izany aza, rehefa miala ny akanjo dia mahatsiaro ho sadaikatra sy saro-kenatra i Libra. Ny fahaizan'ny lahy sy ny vavy mamikitra ao Libra dia manakana azy ireo na dia mahatonga azy ireo hirona amin'ny fidirana an-tsehatra aza. Ity saro-kenatra tafahoatra ity dia ny fiahiahy tsy tapaka ny saim-bahoaka.
Eto no misy ny mpiara-miasa Aquarius nonchalant sy cavalier miakatra amin'ny lovia. Miaraka amin'ny lesona fohy vitsivitsy momba ny hoe «iza no miahy izay eritreritry ny olona» dia mahazo fahalalahana ara-nofo i Libra! Vaky ny gadra famoretana, manomboka mafana ny raharaha ao amin'ny efitrano fandriana! Mazava ho azy, izany indrindra no takin'ny fanahy Aquarius tsy voaroaka!
Ny fanovan'ny Libra avy amin'ny introverted ho an'ny extroverted olon-dehibe dia zavatra ilain'ny Aquarian. Misy varavaran-kely kely amin'ny fotoana ho an'ny fanovana alohan'ny tsy aharetan'ny Aquarius. Raha ela loatra vao miova ny Libra, dia sosotra i Aquarius. Raha vetivety ny fanamby dia faly i Aquarius manome an-dàlana an'i Libra hitodika any amin'ny lalana marina. Avy eo ny fitiavan'ny mpivady, tsy voafehy, mamela ny fikarohana sy ny fanandramana! Dimampolo aloky ny aizina dia boky iray izay miara-mankafy ny fanahy Aquarian sy ny Libra teraka. Eny, misy ny fifanarahan'ny Aquarius sy Libra ao amin'ny efitrano fandriana.
Navoaka ny famoretana ara-nofo, maneho hevitra i Libra. Ity no fahafinaretana mahafinaritra an'i Aquarius. Ireo teraka teo ambanin'ny mariky ny Water-Bearer dia tsy manana olana velively amin'ny resaka firaisana. Samy mampahafantatra ny hetahetany amin'ny fomba mora ny Air Signs. Io dia ahafahan'ny fifandraisana firaisana ara-nofo manangana andry fifandraisana. Ny toerana mimanda dia faharoa amin'ny faharanitan'izy ireo sy fanomezana ho an'ny resaka.
mifankahazo ve ny pisces sy ny virgo
Aquarius sy Libra Communication
Raha ny fahitan'ny besinimaro azy dia eritreretin'i Libra foana izany. Ny Libra teraka dia mila mahatsapa fa toa hitan'ny besinimaro ho olona tsara izy ireo. Zava-dehibe ho an'ny Libra ny mifanaraka amin'ny tambajotra sosialy akaiky azy ireo. Tsy mety ho hafa noho izany ny Aquarius. Tsy manome hoot roa izy ireo araka ny eritreritry ny hafa. Mpiresaka sy sosialy lehibe, fa ny fanirahana dia tsy manelingelina an'i Aquarius mihitsy. Ireo toetra ireo dia sarotra ovaina amin'ny teraka Libra sy Aquarian.
Ny tsipika fifampiresahan'ny lalao fitiavana Aquarius sy Libra dia tsy maintsy misokatra. Io no fomba tokana hahatongavan'ny fifandraisana. Mila miantso ny fahasosoran'i Libra i Aquarius, indrindra fa rehefa tsy mailo ny libra. Libra dia mila mahay maneho ny filana sy ny filana ary ny fahatsapana. Mila mianatra ny fomba fampifanarahana ny zavatra lazain'i Libra i Aquarius. Mila mandinika ny sasany amin'ireo torohevitra tsara omen'ny Aquarius i Libra. Ny teraka Aquarian dia manana fomba maivana amin'ny fitantanana ireo adin-tsaina ara-tsosialy.
Rehefa tsy milamina ny filàn'i Aquarius ny dia hatrany dia tsy maintsy milaza zavatra i Libra. Raha miha reraka ny Aquarius amin'izay toa fanemorana avy any Libra dia tonga ny fotoana hitenenana. Tsy misy mamaky saina eto, na dia manana eritreritra mandroso sy mandroso aza i Aquarius. Ity mpivady tantaram-pitiavana ity dia mila mianatra mifampiresaka ary mandatsaka ny eritreritra rehetra. Raha mihombo ny tsindry amin'ity fifandraisana ity, dia i Aquarius no voalohany hisintona ny plug aminy.
Ity mpivady ity dia manana fototra mafy orina hiara-miasa aminy koa. Ny mpivady dia mitovy hevitra amin'ny finoana, faharesen-dahatra ary ny fanaony isan'andro. Arakaraka ny faharetan'ny fiarahan'izy ireo, ny tsara kokoa. Ny mpiara-miombon'antoka tsirairay dia nihatsara kokoa tamin'ny faminavinana ny filàna sy ny safidin'ny iray hafa. Tsy azo ihodivirana izany. Mampanantena ny fifanarahan'i Aquarius sy Libra fa hahita fitiavana lehibe izy ireo.
Fifandonana Aquarius sy Libra
Mandrosoa izao, fantatry ny rehetra fa ho avy izany. Tsy misy mpivady manana firaisana tonga lafatra. Misy ny fifandonana hodinihina, na dia ny fiadiana ny akoran'i Aquarius sy Libra aza. Izy roa dia marika famantarana ny Air amin'ity pairing ity. Midika izany fa misy fotoana izay miovaova na tsy misaina ny mpivady. Mety handositra ny olona iray na hisoroka fifandonana fa tsy hiatrika izany. Indraindray dia tsy diso anjara mihintsy ny hetsika mihetsika amin'ny rivotra. Miaraka amin'ity mpivady ity dia mandeha lavitra ny faharetana sy ny fangorahana.
Mila mahatadidy izay lazain'izy ireo sy ataony amin'ny hatezerana i Aquarius sy Libra. Raha vao eny amin'ny rivotra ny teny dia fanehoana maharitra. Midika izany fa mila manaikitra ny lelany i Aquarius. Tsy misy dikany ny famoahana zavatra manesoeso. Mila mamehy ny tsikera i Libra.
Ankehitriny, ny manaikitra ny lelany dia tsy midika hoe tsy misy fanehoana ny momba ny tena. Midika izany fa ny fifehezana ny valiny ratsy sy manintona satria mora ataon'ny Aquarius. Raha mamela ny fihetseham-po hiringiriny ny lalao fitiavana an'i Aquarius na Libra, dia mety hanjary mangidy ny raharaha. Ny hany zavatra tokony hialana amin'ireto mpivady ireto dia ny faharisihana. Tokony hamaha olana haingana ireo mpivady. Tsara kokoa noho ny fanapoizinana ny fifandraisana miaraka amina tononkalo tsy mitongilana.
Aquarius sy Libra Polarity
Ny polarity dia enti-milaza angovo. Ireo angovo ireo dia lahy sy vavy na yang ary yin. Ireo famantarana rivotra roa, Aquarius sy Libra, dia samy lahy, ary ireo famantarana. Midika izany fa ny famantarana roa dia manana fiara, mifototra amin'ny hetsika, ary mihetsika na mahery setra.
Mifankahazo tsara ireo famantarana roa ireo satria mizara an'io angovo io. Midika izany fa afaka mifamporisika izy ireo. Izy ireo koa dia afaka mifanampy amin'ny alàlan'ny fanamby sy ny sakana. Saingy, satria samy mandroso na mahery setra ireo famantarana roa ireo dia tsy maintsy mitandrina ity mpivady ity mba tsy hifanitsaka amin'ny rantsantongony. Raha mifampikasoka ity mpivady ity dia miseho ny tolona fahefana.
Aspecta Aquarius sy Libra
Rehefa miresaka momba ny lafiny sy ny fanandroana dia misy ny elanelana misy eo amin'ny famantarana. Antony iray mitaona ny fifanarahan'i Aquarius sy Libra ny famantarana ny trine. Io no mampisy ny famantarana roa zodiaka roa. Ireo mari-pahaizana Trine dia manana singa iraisana, satria i Aquarius sy Libra mizara ny famantarana ny Air. Mahatsapa ho mahazo aina izy ireo.
Rehefa miaraka izy mivady dia afaka manao izay hahatsapany ilay ankilany ao an-trano. Misy ny ambany noho ny fitoviana, ny firindrana ary ny firazanana. Rehefa trine ny famantarana dia mazàna mifankahazo mifankahazo izy ireo. Tsy misy fiarovana na fanazavana ilaina amin'ny asan'ny tena. Fa maninona Satria samy mahafantatra ny fihetsem-po sy ny antony manosika ny hafa.
Mifanaiky izy mivady fa tsy misy fanontaniana apetraka. Azon'izy ireo ny lesoka amin'ny toe-piainan'olombelona ary raisin'izy ireo amin'ny fony manontolo izy ireo. Mariho, misy loza ateraky ny mahazatra. Ny teny family dia akaiky ny teny mahasorena .
Singa Aquarius sy Libra
Amin'izao fotoana izao dia miharihary fa ny Aquarius, ary ny fifandraisana Libra dia manana singa mitondra ny Air. Hanao ahoana ity karazana fifandraisana ity? Hoy i Aquarius: 'Andao handeha hitsambikina Bungie!' Manaiky tsikitsiky goavambe i Libra. Libra hoy izy: 'Andao hiakatra amin'ny fiaramanidina isika ary hitsidika an'i Eropa!' Nanomboka nanangona ny lasakany i Aquarius. Hoy i Aquarius: 'Anio hariva, ny sarimihetsika, teatra, na Opera?' Libra hoy izy: 'Ndao hisintona mololo isika!' Ary hoy i Libra: 'Ndao hanangona sy handeha hitsangatsangana amin'ny Harley mandritra ny faran'ny herinandro!' Mahatsapa ny fitiavana ao am-pon'izy ireo i Aquarius!
Ny teny foto-kevitr'ity fifandraisana ity dia ny 'fientanam-po.' Raha tsy misy an'io dia ho reraka sy ho levona io fifandraisana io. Samy noana amin'ny fitsangatsanganana i Libra sy i Aquarius. Ny hanoanana izay mitaky famahanana matetika mba hitazomana ny biby. Toa ny fifandraisana natao tany an-danitra. Eny tokoa, rehefa tsara ny zava-drehetra, dia fifandraisana izay irin'ny olona hafa. Saingy, misy ny tolona eo amin'ny olona roa manana singa iray mitaona.
Ny zavatra misaintsaina dia iray amin'ireo fahazarana zarain'i Aquarius sy Libra. Ny Libra dia mazàna manemotra fa mangataka andro satria izy rehetra dia eo am-pandaminana ny loha. Ilaina ny fifandanjana amin'ny Libra izay tian'i Aquarius miala voly. Olana iray ihany koa ny fiarahana amin'ny mpiara-belona. Mety hiparitaka ny lalao fitiavana an'i Aquarius sy Libra. Avy eo adinon'izy ireo ny mandany fotoana misy kalitao miaraka.
Rehefa fikatsahana zavatra ara-tsaina ny fizaran-tenan'ny vehivavy Aquarius Man sy Libra dia tonga lafatra izany. Ny famantarana Air Air dia nahatonga an'ity ekipa ity 'ho eo an-dohany rehetra.' Lehilahy iray Aquarius no mahita fa manintona ny filan'ny vehivavy Libra sy ny fomba fandalinana nataony. Hitan'i Libra ny fanirian'ilay lehilahy Aquarius hahatonga an'izao tontolo izao ho toerana mahafinaritra kokoa. Samy manatrika fanamby sy izao tontolo izao amin'ny lafiny famoronana ireo mpiara-miombon'antoka. Miaraka amin'ny faharanitan-tsaina hifanaraka, ny ekipan'ny Aquarius sy Libra dia mifananka aingam-panahy.
Ny mpivady Libra Aquarius dia olona matoky tena ihany koa. Tsy mampaninona azy ireo rehefa mandeha samirery ny olon-tiany mba hijery ireo zava-mahaliana vaovao. Noho izany dia tsy hanana olana izy ireo amin'ny famindrana ny fifandraisana ao amin'ny efitrano fandriana. Ary eo no manomboka ny fahafinaretana, satria miavaka amin'ny lalao saina izy ary mampifanaraka ny dingana vitany.
Na dia mampiroborobo fahatokisana amin'ny fomba mora aza ity pairing ity, dia mbola miady mafy ao amin'ny efitrano fandriany izy ireo. Rehefa mikatona ny varavaran'ny efitrano fandraisam-bahiny dia mahasosotra ireo fihaonana vitsivitsy voalohany. Ny fotoana manahirana dia vokatry ny tsy fahatokisan-tenan'ny Libra. Ny fahamendrehan'ny vehivavy Libra dia mavesatra amin'ny fifanarahan'i Aquarius sy Libra. Raha vao mahatsapa fiarovana sy fampiononana izy dia avelany handeha kely, ary mihamafy ny firaisana. Aquarius dia iray izay tia fanandramana. Libra koa dia tia zavatra vaovao, ka ny fanandramana sasany dia miafara amin'ny menio.
Saingy io fifandraisana io ve dia siramamy sa zava-manitra avokoa?
Misy fandrika sasany atrehin'ity mpivady ity raha tsy izany. Voalohany, manan-tsaina ny lehilahy Aquarius fa tsy mandray fanapahan-kevitra hendry foana. Izany dia mamela an'i Libra mametra-panontaniana hoe inona no eritreretin'ny olon-tiany. Rehefa mangataka fanazavana dia tsy misy antony i Aquarius.
Toy ny hoe milalao ny angovo toa ny trickster avy amin'ny filan'ny fientanam-po. Libra no mpampifanaraka ny fifandraisana. Ataony mandanjalanja ny raharaha. Indraindray izany dia mahasosotra an'i Aquarius. Ireo teraka teo ambanin'ny mariky ny mpitondra rano izay mahatsapa fa tsy mahay mandanjalanja dia toa mampientanentana.
Mety hipoitra ihany koa ny olana ara-bola amin'ity fifangaroana ity. I Libra, nitondra an'i Venus, dia tia entana be dia be. Manintona ny fividianana zavatra mahafinaritra sy mahafinaritra izy. Midika izany fa mandany vola be izy. Io fihetsika io dia mifanipaka amin'ny endrik'ilay lehilahy Aquarius misimisy kokoa. Ny fandaniana dia mety ho lasa loharanon'ny adihevitra amin'ny fifandraisana Aquarius sy Libra.
Vehivavy Aquarius sy lehilahy Libra dia manao mpivady mahafinaritra. Hanana ny fisondrotana sy ny fadin-tseranana izy ireo, saingy raha mampandefitra izy ireo dia tsara tarehy ny fifandraisana. Mazava ho azy, ilay vehivavy Aquarius maditra dia mety ho sarotra ny hanaiky lembenana koa. Zavatra tsara dia manana faharetana be ilay lehilahy Libra. Mety ho hitan'ilay vehivavy Aquarius ilay lehilahy Libra somary mahazo aina loatra amin'ny tontolo manodidina azy. Mila mangetaheta hetsika sy traikefa nahafinaritra izy raha mbola manintona azy ihany. Tsy afaka manolo an'izany faniriana izany amin'ny lalao video mahafinaritra koa izy. Tsia, ny lalao video PS4 dia tsy ny hevitry ny vehivavy Aquarian momba ny traikefa nahafinaritra iray. Mahafinaritra mandritra ny antsasak'adiny, eny. Adventurous, tsia.
Ny vehivavy Aquarian dia mety ho mahery setra ary manery. Te hanana zavatra araka ny itiavany ny fifandraisana izy. Saingy, raha tsy misy miova ary tsy mahazo milalao herinaratra amin'ny fifandraisana izy dia hanomboka hikomy.
Amin'ity lalao fitiavana Aquarius sy Libra ity dia miteny sahady ny vehivavy Aquarian. Tsy manana olana amin'ny fanehoana ny faniriany izy. Mijanona fatratra amin'ny halaviran'ny fiara izy. Toa lehilahy mangataka andro ilay lehilahy Libra, saingy nofinofy izany. Ny teny filamatrany dia ny 'mahay mandanjalanja' ary raha mahay mandanjalanja dia mitaky fahaizana sy fotoana be dia be ny zava-drehetra. Ity filana fandanjana mandanjalanja ity dia manoloana ny fihetsika hafahafa an'ny vehivavy Aquarian. Notazominy foana ny lehilahy Libra ao aminy amin'ny heviny rehetra. Rehefa mandanjalanja toe-javatra iray izy, dia manimba ny toe-javatra hafa. Mitady fandanjalanjana indray izy. Mitohy ny fihodinana ratsy.
Ny lehilahy Libra dia hiady amin'ny fahazoana vehivavy Aquarian maniry fanoloran-tena. Raha mahomby izy dia azy mandritra ny fiainana manontolo. Tsy miova ny fanoloran-tenany raha tsy mivadika izy. Ilay lehilahy Libra dia tia mijerijery ilay vehivavy Aquarius miaraka amin'ny fanehoana firaiketam-po mahery. Tsy maninona izany amin'ny voalohany, raha tsy hoe manomboka voadoka izy.
Ilay vehivavy Aquarius dia mahita fa manintona ilay lehilahy Libra noho ny antony maro. Mahafinaritra izy ary mahay mamadika ny hafanana amin'ny fifandraisana. Manana fomba amin'ny teny izy ary tsy manana olana amin'ny filazana azy ireo zavatra mahafinaritra tiany ho re. Ao amin'ny efitrano fandriana, rehefa mahazo aina izy, dia avelany hamaha ny sisiny. Ity lafiny bibidia ity dia tena mankasitraka ny natiora Aquarian.
Ny lehilahy Libra dia tompony amin'ny foreplay. Voalohany, manintona ny sain'ny vehivavy Aquarian izy. Avy eo nofohaziny zavatra ara-nofo izy. Voninkazo, sôkôla, fanomezana tsara tarehy, ary fananganana toerana mametra ny toe-po. Ity farany dia ao anatin'ny fahaizan'ny lehilahy Libra avokoa. Ny toetra ara-tsosialin'ny lahy Libra dia mahatonga azy hisokatra hihaona amin'ny olon-kafa, ao anatin'izany ny vehivavy. Raha mikasa ny hilalao mafy mba haharitra ela loatra ilay vehivavy Aquarian dia mety hahita fifaninanana izy. Mahasarika vehivavy ny Aquarius.
Ny manan-tsaina, manidina ary miovaova dia toetra mampiavaka ny fanahy Aquarian sy ny fizarana teraka Libra. Ny spontaneity dia zavatra ankafizin'ny mpiara-miasa ary mitarika ny fifanarahan'i Aquarius sy Libra. Eny, mitaky fiarahana bebe kokoa noho ny Aquarians ny Libras. Eny, ny Aquarians dia mety maniry fitokanana bebe kokoa noho ny Libras. Na izany aza, toa mora resahina ireo raharaha ireo. Farafaharatsiny, ity pairing tsy mahazatra ity dia mahatonga azy ho tsotra.
Ianao ve mitady fampahalalana bebe kokoa momba ny famantarana ny zodiaka sy ny fifanarahan'ny mpivady? Aza misalasala mitsidika ny sisa amin'ny fampahalalana zodiac maimaim-poana ao amin'ny Daily Horoscope Astros! Ankehitriny ianao dia afaka mianatra momba ny olona amin'ny fiainanao ary inona no tena mampiavaka azy ireo!
Moa ve Aries sy Aquarius mifanaraka amin'ny fitiavana sy ny finamanana? Hanao ahoana ny tahan'ny mpivady rehefa ao amin'ny efitrano fandriana? Azon'izy ireo atao ve ny mampandeha ny zavatra na eo aza ny fandriky ny fitiavana? Jereo ny fitahiana ho avy sy ny ho avy ho an'ny duo! Ianaro hoe ahoana no ahaizan'ny fifankatiavana eo amin'ny fitsapana ny fotoana! Avy amin'ny namana ka hatramin'ny olon-tiana dia afaka miaritra ity mpivady tantaram-pitiavana ity.
Tsindrio raha hianaranao rehetra Ny toetran'i Aquarius, ny toetrany ary ny toetrany !
fampifanarahana lahy sy vavy vavy capricorn
vehivavy sagittarius sy lehilahy capricorn eo am-pandriana
mifanentana amin'ny lehilahy sy vehivavy virjiny pisces
lehilahy iray sy vehivavy homamiadana manao firaisana ara-nofo